Global Voices teny Malagasy » Korea Atsimo sy Avaratra Anatin’ny ‘Tany Miady’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Avrily 2013 4:51 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsinanana, Etazonia, Japana, Korea Atsimo, Korea Avaratra, Shina, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Rehefa nofoanan'ny Avaratra ny soniam-pampitsaharan'ady amin'ny Atsimo tamin'ny fiandohan'ny volana marsa 2013, sia nanatontosa fanazarana ara-miaramila niarahana i Etazonia sy i Korea Atsimo ho fampisehoan-kery. Tamin'ny 28 marsa teo dia nisy voromby hainga-pisidina B-2 an'i Etazonia mpidaroka baomba nisidina  ny Saikanosy Koreana ka nandray izany ho fetra tsy azo leferina intsony ny mpitarika an'i Avaratra Kim Jong-un ka nibaiko ny hampivononana ny balafomanga  tamin'ny 29 marsa. Ny ampitso, Nanambara ihany koa i Kim fa ao anatin'ny “tany miady” amin'i Korea Atsimo ny any Avaratra ary nivoady izy ny hanakatona ny faritra indostrialy marolafy ao Kaesong, faritra iarahan'ny roa tonta miasa. Tamin'ny 31 marsa, nandefa voromby mpiady hainga-pisidina F-22  tany Korea Atsimo i Etazonia hanaovana fanazarana ara-miaramila vaovao.
Sarin'ny fanazarana ara-miaramila ataon'i Etazonia sy i Korea Atsimo isan-taona, Navoakan'ny mpisera FlickrU.S. Army Korea (Tahirintsary ara-tantara)
Eny fa na dia ho an'y Koreana Tatsimo efa zatra amin'ny karazana gidragidram-pitenenana fanaon'ny Tavaratra aza dia tena mampatahotra indrindra ny fivoaran-draharaha ankehitriny. Fa misy ny mpiserasera sasantsasany no mampitony ny namany avy amin'ny fitondrana fomba fitenenana taloha hoe ‘Tsy Manaikitra Mihitsy ny Alika Mivovò ’–izay lasa iray amin'ny sariohatra be mpampiasa indrindra ao amin'ny tontolon'ny Twitter sy ny Blaogy. Saingy samihafa ny fomba fampiasan'ny mpiserasera io fomba fitenenana io.
@idk209 : Milaza ny sasany fa ny Tavaratra, izay zatra ny mamaly ny fanazarana ara-miaramila ataon'i Etazonia sy Korea Atsimo amin'ny fanaovana fanazarana ara-miaramila ho azy ihany koa aorian'izany, dia tsy ampy angovo (hery) intsony amin'izao fotoana izao ary miezaka ny hivovò mafy. Ny alika, rehefa matahotra, miezaka ny mivovò tahaka ny hamono, saingy mahalana vao manaikitra.
@tobeto01 : Raha ny fomba fikabariana lianady fanaon'i Korea Avaratra, milaza ny olona hoe “Tsy manaikitra mihitsy ny alika mivovò”. Saingy ahoana raha adala io alika iray io? Ho tratran'ny haromotana izay tratrany (mieritreritra ny fiantraikany) rehefa voakakitry ny alika adala (romotra).
@nezerac : Marina fa mampatahotra tokoa ny alika mpivovò. Ary ho an'i Korea Avaratra- arakaraka ny ivovozany, ny ihomehezana azy araka izay ataony. Saingy mbola mila mivonona amin'ny tranga mety ho ratsy indrindra isika. Saingy tsy ilaina ny mamaly azy isak'izay mivovò.
Misy mazava loatra ny mpiserasrea sasany efa voakotaba loatra amin'ny vaovaon'i Korea Avaratra ka tsy miraharaha intsony. Ny sioka eto ambany no mampiseho ny fomba fandraisan'ny Koreana Tatsimo ity vaovao ity, mampitaha ny fomba iainan'ny Japoney efa zatra fihovitrovitry ny tany, rehefa miresaka fihovitry ny tany.
@kor_heinrich : [Japana] Raha misy fihovitry ny tany mahatratra ny maridredy dimy mahatratra an'i Japana, milaza ny Media iraisampirenena: Goay! loza izany!! milaza ny olo-tsotra Japoney: tsy dia mampikorapaka. Efa mpitranga matetika izany. [Korea Atsimo] Rehefa milaza i Korea Avaratra fa hanao an'i Seoul ho ‘ranomasin'afo’, milaza ny Media iraisampirenena: Goay! loza izany!! milaza ny olo-tsotra Koreana: tsy dia mampikorapaka. Efa mpitranga matetika izany.
Raha mikatona ny Faritra Indostrialy ao Gaesung , izay manome vola roa miliara dolara isan-taona ho an'i Avaratra, manombana ny tatitra ao an-toerana fa hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny Koreana Tavaratra 300 000 izany  [ko]. Ny olona sasany koa miady hevitra amin'ny fiantraikany hafa eo amin'ny olona ambony eo amin'ny fahefana Koreana Tavaratra sy ny olo-tsotra Koreana Tavaratra.
hssi84 : Tsy hamela ny fahefany ho votsotra eo ampelatanany mihitsy ny mpitarika Koreana Tavaratra, efa migoka ny hamamin'ny fahefany. Tsy ho sahisahy foana hanao ady mety haharesy azy izy. Tsy vitan'ny lalao tsinahinahy (filokàna) hialam-boly ny Fahefana na zavatra tsy mampaninona azy raha very.
@ourholykorea : (Ho an'ny vahoaka Koreana Avaratra) Tsy tsara noho ny fiainana amin'ny ady ny toe-draharaha anaty fandriampahalemana. Zavamisy mampihoron-koditra raha iverenana ny tamin'ny taompolon'ny 1990 ny fahamaroan'ny vahoaka Koreana Tavaratra maty tamin'ny fampitsaharana ny fizarana sakafo mihoatra noho ny isan'ny maty nandritra ny ady koreana.
Tsy misy marika ahitana filefahany ny fifanenjanana sy ny fifandrahonana natao, ary manombana ny sasany fa mety hanindry ny fanapihana i Kim Jong-un mba tsy ho menatra  [ko]. Mihamaro ireo mpisera mamoaka ny feony manahy fa tsy fihetsika hendry ny mamaly ny fihantsiana amin'ny fihantsiana, mihevitra fa mety ho resy i Korea Atsimo raha tena misy ny ady.
@toplkw : Raha tena manao fihantsiana (ara-miaramila) tokoa i Korea Avaratra, mety hahatratra ny isan'ny maty tamin'ny ady lehibe voalohany ny lasibatra : rohy mankany amin'ny lahatsoratra ao an-toerana  [ko] Henoy ry mpandala ny mahazatra: tsy hamaha olana na oviana na oviana ny mamaly fananganan'ady amin'ny fananganan'ady ary tsy hahamafy ny fiarovana ny firenentsika tampoka eo ny fananana ny toe-tsain'ny ady mangatsiaka.
@welovehani : Tokony ho zavatra tsara raha ho fiarovana ny filaminantsika ny fisidinan'ny voromby haingam-pandeha amin'ny habakabaky ny saikanosy Korean. Saingy nanapa-kevitra taorian'izany i Korea Avaratra handrava ny fampitsaharan'ady. Tsy miaro ny any Avaratra aho, raha ny tena marina dia mitezitra azy ireo aho tamin'ny nanombohan-dry ny fihantsiana voalohany. Saingy na ny olona sasany any Etazonia aza dia efa manomboka maneho ny tahony amin'ny fomba ifehezan'i Etazonia ny toe-draharaha– mamaly ny fihantsiana amin'ny fihantsiana mitovy amin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/04/04/47496/
 ny soniam-pampitsaharan'ady : https://globalvoicesonline.org/2013/03/06/south-koreans-dub-north-koreas-armistice-threat-a-daring-aid-ploy/
 mpidaroka baomba nisidina: http://www.csmonitor.com/USA/DC-Decoder/Decoder-Wire/2013/0401/US-jets-to-Korea-Why-send-stealth-fighters-to-the-region-video
 hampivononana ny balafomanga: http://abcnews.go.com/International/north-korea-puts-artillery-forces-high-alert-threatens/story?id=18812245#.UVcjrvIkRfB
 Nanambara ihany koa i Kim : http://abcnews.go.com/International/north-korea-state-war-south-korea/story?id=18846180#.UVnUiKtNZ9Q
 nandefa voromby mpiady hainga-pisidina F-22: http://www.reuters.com/article/2013/03/31/korea-north-usa-f-idUSL2N0CN0BT20130331
 Tsy Manaikitra Mihitsy ny Alika Mivovò: http://en.wiktionary.org/wiki/barking_dogs_seldom_bite
 fiantraikany amin'ny fiainan'ny Koreana Tavaratra 300 000 izany: http://t.co/NMcyeBUdxv
 ho menatra: http://i.wik.im/112263
 rohy mankany amin'ny lahatsoratra ao an-toerana: http://www.viewsnnews.com/article/view.jsp?seq=98067 적대관계와